Faahfaahin: Diyaarado Dagaal Oo Weerar Ka Geystay Duleedka Magaalada Gaalkacyo – Goobjoog News
Wararka naga soo gaaraya degaanka Jeexdin oo ku yaalla dhanka bari ee magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay weerar sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Weerarka oo aroornimadii hore ee saaka dhacay ayaa waxaa geystay diyaarado dagaal oo ay leedahay Dowladda Maraykanka islamarkaana ay wehliyeen ciidanka nabad sugidda Puntland.
Ilo lagu kalsoon yahay ooku sugan Gaalkacyo ayaa u sheegay Goobjoog News in 13 Askari ay Galmudug kaga dhimatay weerarkaasi ay Maraykanka diyaaradihiisa qaadeen islamarkaana ay ku dhaawacmeen 9 kale.
Waxaa sidoo kale jirta illaa labo baabuur oo kuwa dagaalka ah oo iyana gubtay intii weerarka uu socday.
Ilaha lagu kalsoon yahay waxay xaqiijiyeen in Ciidamada Puntland kuwooda nabad sugidda ee loo soo gaabiyo magacooda PIS-ta ay hagayeen diyaaradaha Maraykanka ee duqeymaha ka fuliyey Jeexdin.
Maanta waxaa goobta ay wax ka dhaceen gaaray saraakiisha ciidamada Galmudug kuwooda ku sugan Gaalkacyo, taliyaha daraawiishta gobolka Mudug, maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacyo iyo ciidamo aad u fara badan.
Dhaawacyadii ka dhashay weerarka ayaa lagu dabiibayaa Isbitaalka dhexe ee magaalada Gaalkacyo, waxaana saraakiisha ay ku eedeyeen weerarkaasi inay si qaldan u hageen saraakiil ka tirsan Puntland weliba si ula kac ah.
Xaaladda degaanka Jeexdin ee duleedka magaalo madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo ayaa maanta deggan oo hadda xasiloon.
SAWIRRO:- Shacabkii Saarnaa Markabka Nawaal 3 Oo Boosaaso Lagu Soo Dhaweeyay
Galmudug Iyo Ahlu-sunna Oo Maanta Ku Shiraya Jabuuti
Cyztru twsscd cialis over the counter at walmart cialis cost
Suaeps attqlo Buy generic viagra cialis canada
Wnjyxh kxgtnr cialis pills generic for cialis
Vdefzd uaxhzb brand viagra over the net...
Ogyspv ovugni approved viagra...
Tatpxz lvfjnz viagra next day delivery...
cialis generic availability buy cialis purchasing cialis on...
Vcjcya fjrgkz generic viagra usa...